I-PORCELAIN VS TILE YECERAMIC - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi I-Porcelain vs Tile yeCeramic
I-Porcelain vs Tile yeCeramic
Wamkelekile kwiphepha lethu malunga ne-porcelain VS tile ye-ceramic apho sichaza ngokulungileyo kunye nolubi kuhlobo ngalunye.
Zonke i-porcelain zenziwe nge-ceramic kodwa ayizizo zonke i-ceramic i-porcelain yeyona ndlela ilula yokukhumbula umahluko phakathi kwamagama amabini aqhelekileyo aphoswe kwihlabathi loyilo lwangaphakathi. Iithayile ze-Porcelain kunye neCeramic zombini zi-ceramic zobuchwephesha, zinempawu ezimbalwa ezahlukeneyo. Oku kuya kwahluka kakhulu kwithayile yekwari, iitayile zeglasi kunye nelitye lendalo. Akukho porcelain okanye i-ceramic tile ekucetyiswa kakhulu ukuba ibekwe ngaphandle.
Umahluko phakathi kwePorcelain kunye neeTiles zeCeramic
Ukulinganiswa kwethayile yePorcelain
Loluphi uhlobo lweTayile ekufuneka ndilusebenzise?
Nangona zombini i-porcelain kunye neetiles zineempawu ezinokumelana namanzi, i-grout esetyenziselwa ukutywina iya kuba yinto esesichengeni. I-grout esetyenziselwa ukutywina iithayile yinto enesithuku ngenxa yoko iyakwazi ukuthatha ibala kunye nokufuma. Kubalulekile ukutywina ngokufanelekileyo kunye nokugcina i-grout kunye ne-porcelain kunye neetiles zeceramic ukugcina ubuhle be-tile kunye nomgangatho wokumelana namanzi. Ukuba ukhathalelo aluthathwanga kunokubangela ingozi kwiithayile okanye ekubunjweni kwegrout uqobo.
Iithayile ze-Porcelain kunye neCeramic zombini zinokukhethwa komgangatho onzima kakhulu. Ngokwesiqhelo, zisetyenziswa kakuhle kwizicelo zomgangatho womhlaba. Ubunzima bukwenza ukufakwa kwezinto nganye kubize kakhulu ngenxa yeendleko zabasebenzi ezongeziweyo. Ukuba ufaka kwinqanaba eliphezulu, qiniseka ukuba ufumana uhlolo ukuqinisekisa ukuba isakhiwo sinokubamba imithwalo yezinto eziphathekayo.
Kuqala siza kugubungela izibonelelo zethayile ye-porcelain emva koko sizithelekise ngokwahluka kwazo vs iithayile zekheram.
Ilitye jonga i-porcelain tile yeshawari
I-Porcelain ivela kwigama lesiTaliyane elithi porcellana, elithetha iqokobhe lenkomo okanye i-chinaware. I-porcelain entle iya kuba yinto emhlophe enomzimba oqinileyo, oxineneyo. Ngokwesiqhelo zizinto ezibizayo. I-porcelain entle yahluka kakhulu kwiithayile ze-porcelain ezikufutshane. I-Porcelain tile yenziwe ngodongwe olumhlophe, isanti kunye ne-feldspar. Umbala uya kuhamba kuyo yonke iithayile okanye unokugcoba ngaphezulu. Ukukhetha i-tile ngaphandle kwe-glaze kunokuba ngcono kwiindawo eziphezulu zendlela ngenxa yokutsala kunye nokunxiba. Ngale ndlela umbala ofanayo uya kuba ngaphantsi, wenze iichips, ukukrwela kunye nokunxiba phantse okungabonakaliyo. Ukongeza i-glazing, nangona kunjalo, kuya kunika imibala emininzi kwiithayile xa kuthelekiswa nombala wendalo.
I-Porcelain yimveliso eshinyeneyo kwaye ihlala ixesha elide. Kuba i-porcelain yinto ejiyileyo kune-ceramic tile, oko kuthetha ukuba yinto encinci kakhulu. Oku kuya kuthetha ukuba ifunxa kwaye igcina ukufuma okuncinci. Oku kulungile kuba kuya kuhlala ixesha elide kwaye kufuna ukugcinwa okuncinci kunye nokugcinwa kwexesha. Ngenxa yobume bayo kunye nomxholo ophezulu we-feldspar, iya kuba yinto eyomeleleyo kakhulu. Oku kuya kuthetha ukuba i-porcelain iya kumelana nokugcwala kwabantu. Zonke ezi zizathu zenza ukuba lukhetho oluthandwayo Uyilo lokuhlambela .
Ukuba ngesizathu esithile iichips ze-porcelain zetiles ziya kubakho umbala ofanayo kuyo yonke loo nto (ngaphandle kokuba ukhethe ukuyifaka ngaphezulu iithayile), kungcono ukufihla i-chip de loo tile ibuyiselwe okanye ilungiswe. Nangona zonke ezi zivakala njengezinto ezintle, uxinano lubangela ukuba kube nzima ukuba tile (kodwa kungenzeki) ukusika. Oku kunokudala ubunzima ukuba unethemba lokugqibezela ngokwakho iprojekthi yeethayile ze-porcelain. I-Porcelain ihlala icetyiswa ukuba iphathwe kwaye ifakelwe yingcali. Ngokusekwe kuyilo luyakuchaphazela kakhulu ixabiso leenkonzo ezichaziweyo.
Ukongeza kwiimpawu ezaziwayo zokuxinana kunye ne-porcelain yokumelana namanzi kukwangqinwa ngamachaphaza kunye nokungacimi umlilo. Ngenxa yezinto ezifanayo ezibangela ukuba iithayile zinganyangeki ngamanzi zenza i-porcelain ingabi lula ngokulula. Ithayile ayizukuvumela amabala ukuba angene kumphezulu ngeendlela ezifanayo ezigxotha amanzi. I-Porcelain nayo yinto engasayi kutsha. Kwimeko yomlilo owenziwe nge-porcelain flooring unokunceda ukuthintela kunye nokuthintela umlilo, okanye ubuncinci ngethemba lokuthenga ixesha elongezelelweyo lokuphuma ngaphandle kwesakhiwo ngokukhuselekileyo.
Iitera zeporcelain zinokubiza kakhulu kuneethayile zeceramic ngenxa yazo zonke ezi zinto zikumgangatho ophezulu okhankanywe ngaphambili. Rhoqo, kwisitayile se-porcelain iithayile ujonge kwi $ 4 ukuya kwi-8 yeedola ngonyawo wesikwere. Iithayile zesiko, nangona kunjalo, zinokuvela kwi- $ 4 ukuya kuthi ga kwi-25 yeenyawo zenyawo nganye. Ukongeza kwiindleko ezibonakalayo kuphela, ufakelo luya kuhamba malunga ne- $ 4 ukuya kwi-8 yeedola ngonyawo wesikwere, ngamaxabiso anyuka ngokukhawuleza kunye neetayile zesiko eziya kufuneka kwiipateni okanye iimilo ezingaqhelekanga.
Isitayile somthi se porcelain
Umtshato oya kuyo gcina izimvo zemihla
I-Porcelain tile ngamanye amaxesha ibekwa ngaphandle ukuba ine-PEI ephezulu kakhulu (i-Porcelain Enamel Institute) yokulinganisa. Ukulinganiswa kuya kusuka kwi-PEI 0 ukuya kwi-PEI 5, 0 ibe yeyona iphantsi kunye ne-5 ephezulu. I-PEI 0 iya kuba ziindawo ezingenazithuthi zenyawo, iindawo ezinje ngeethayile zodonga.
I-PEI 1 iya kuba ziindawo ezinetrafikhi elula kakhulu enjengezindlu zangasese, okanye iindawo ezingasetyenziswa rhoqo.
I-PEI 2 iya kuba ziindawo ezinetrafikhi elula ezinje ngezindlu zangasese kunye namagumbi okulala.
I-PEI 3 iya kuba ziindawo ezinokukhanya okuphakathi ukuya kokuphakathi okusetyenziswa kakhulu ekhaya.
I-PEI 4 iya kuba ziindawo ezinomodareyitha ukuya kuxinano lwezithuthi oluya kulungela ukusetyenziswa kwasekhaya kunye nezinye izicelo zorhwebo.
I-PEI 5 iya kuba ziindawo ezinezithuthi ezininzi eziya kuthi nakuphi na ukusetyenziswa ekhaya, ngaphandle okanye kuseto lwentengiso. Ngokwesiqhelo, iithayile zekheram ziya kubaleka ukujikeleza i-3 ukuya kwi-4 esikalini ngelixa i-porcelain iyakuba ngu-3 ukuya ku-5 esikalini. Oku kuya kuthetha ukuba kuseto oluninzi iseramikhi okanye i-porcelain iyakusebenza.
Ngokwesiqhelo, i-porcelain isetyenziswa kuphela kuseto lwentengiso ngenxa yesidingo, kodwa mva nje isitayile kunye nokunethezeka bezise isitayile emakhaya.
I-ANSI (iZiko leMigangatho yeSizwe laseMelika) ithi i-porcelain tile isebenzisa indlela yokucinezela uthuli ekhokelela kwithayile exineneyo, engafakwanga, ecoliweyo egudileyo kunye nobuso oburhabaxa. Izinto ezibaluleke kakhulu ezahlukileyo ngamazinga okufunxa amanzi. Oku kusuka kwindlela ezenziwa ngayo, ngokusekwe kwizithako ezisetyenzisiweyo, amaqondo obushushu izithako ezikhutshiweyo kunye nokuba ungakanani umxholo wamanzi esele ususiwe uya kuthi ugqibe iziphumo zovavanyo.
I-Porcelain inezinga leepesenti ezi -5 okanye ngaphantsi. Oku kuchazwa ngokuqhuba uvavanyo apho isiqwenga singene emanzini. Ngokusekwe kubungakanani bamanzi afunyiweyo kuya kumisela umyinge. Ngelishwa ukwahlula phakathi kwe-porcelain yinkqubo yokuzikhethela ngokuzithandela. Oku kwenza ukuba kube nzima kumthengi ukuba axele umahluko phakathi kweentlobo zeemveliso.
Ukuhlamba ngetera yodongwe
Iithayile zeCeramic zikudidi lwezinto ze-crystalline, i-amorphous kwaye aziqhelekanga ngokwendalo. Iithayile zeCeramic azizukugqibezela i-vitrification epheleleyo, kwaye oku kuya kubangela ukuba imathiriyeli inyibilike kwaye ifunxe amanzi ukuba ayifakwanga kakuhle. Ithayile yodongwe yenziwa ngombala omhlophe, omdaka okanye obomvu. Nangona umbala wodongwe unokuhluka ngombala obonwayo uqhelekile kwibala elingaphezulu, oku kuya kubonelela ngeendlela ezahlukeneyo ezibonakalayo.
I-Ceramic tile, ngelixa ingaphantsi kwaye ihlala ixesha elide kune-tile ye-porcelain, iya kuba lukhetho olukhulu kumntu othile kuhlahlo-lwabiwo mali okanye ekucwangciseni ukwenza iprojekthi ngokwabo. I-Ceramic Tile ilula kakhulu ukusika ngesarha emanzi, okanye i-snap tile cutter, enokuthi yenziwe ekhaya xa kuthelekiswa nomsebenzi. Ngenxa yokuba iyimveliso engqindilili kune-porcelain ayithethi ukuba ayisiyonto esemgangathweni, luhlobo nje lwezoqoqosho lwe porcelain.
I-ceramic emhlophe ecwebezelayo i-subway tile backsplash
Nangona i-ceramic tile yaziwa nangokuthi ingaphantsi kwamanzi kunethayile ye-porcelain, inokufakwa i-glazed eya kongeza ukhuselo kamva oluya kwenza ukuba i-ceramic tile ingabi namachaphaza kwaye inqabile ekungeneni kwamanzi. Ukuba ukuhlala ixesha elide kuyinkxalabo, kukho ezinye iithayile ezinzima (ezibiza kakhulu) eziya kuthi ziphantse zingabinakho ukuqhekeka kwaye ziya kuhlala ixesha elide ukuba zigcinwa ngokufanelekileyo.
I-Ceramic tile yinto ephantsi kakhulu kune-tile ye-porcelain. Kungenxa yokuba iithayile zeceramic zibiza kancinci ukuvelisa kunye nokufaka. Ngokwesiqhelo, iithayile zeceramic ziya kubiza malunga ne- $ 3 ukuya kwi-7 yeenyawo ngenyawo lesikwere, kwaye ezinye iziqwenga ezinqabileyo zingaphantsi kunoko. Ngokufana ne-porcelain, iithayile zeceramic ziya kunyuka ngokubonakalayo xa iziqwenga zesiko kunye noyilo luceliwe okanye lufuneka. Ukufakwa kuyakusebenza malunga ne- $ 4 ukuya kwi- $ 8 ngonyawo wesikwere, kwakhona amaxabiso anyuka ngeepateni ezingaqhelekanga okanye zesiko kunye neziqwenga.
Xa kuziwa kwi-porcelain vs iitiles zeceramic kwimveliso enobungakanani bohlahlo-lwabiwo mali, iiceramic tile yindlela yokuhamba. Ukuba imali kunye neendleko zabasebenzi aziyonto, i-Porcelain lukhetho oluthandwayo igumbi lokuhlambela elingaphantsi kunye namagumbi okuhlala, amagumbi okulala kunye neekhikhini. I-Porcelain isebenza kakuhle kwiindawo ezininzi eziphakamileyo zekhaya kunye neendawo zangaphandle ukuba kusetyenziswa i-tile efanelekileyo yokulinganisa. Ukuba wenza indawo yebali lesibini ngethayile, i-ceramic yeyona ndlela ingcono yokuhamba, kodwa kuphela kwisithuba esincinci kakhulu kwaye kufuneka kubekho uhlolo ukuqinisekisa ukuba ulwakhiwo luthwala umthwalo.
Ipateni emenyezelwe ngomgangatho yethayile yomdongwe
Imveliso nganye ibonelela ngeepateni ezahlukeneyo kunye nemibala okoko imveliso inokunqunyulwa kunye ne-glazed. I-Porcelain inemibala eya kuthi ke ijongeke ngcono xa ikrwitshiwe okanye icociwe. Ukuba oku kuya kuba kukwenzela ngokwakho iprojekthi, ukunamathela kwithayile yeceramic kuya kuba lolona khetho lubhetele. Kungenxa yokuba kuya kuba lula ukusika kwaye kungabizi mali ininzi, ke ukuba kukho iimpazamo ayonakalisi kangako. Ukuba wenza imigangatho ye-porcelain kuyacetyiswa kakhulu ukuba uyishiyele kwiingcali.
eyakhiwe kwidesika yeofisi
Izipho zebday zeminyaka eli-18 ubudala
Ngaba umntu olondolozayo nonenkululeko banobudlelwane obuyimpumelelo okanye umtshato
yintoni umtshato wokuqala jonga
U-olivia palermo kunye noJohannes huebl umtshato